Barcelona oo ku jirta Afarta koox ee Xiriirka la sameesay Sergio Aguero
Home Horyaalka Ingiriiska Barcelona oo ku jirta Afarta koox ee Xiriirka la sameesay Sergio Aguero
Manchester City weeraryahankeeda Sergio Aguero ayaa lagu soo waramayaa in uu ku biiro karo afar kooxood midkood marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaagan.
Xiddiga reer Argentine ayaa qandaraaskiisa Etihad Stadium dhacayaa xagaaga waxaana la filayaa inuu koox cusub raadsado ka dib markii uu si qurux badan ula soo ciyaaray kooxda afarta jeer hanatay Premier League.
Iyadoo wadahadalada heshiis cusub la sheegayo inaan weli la furin, Aguero wuxuu u muuqdaa mid bixi doona bilo yar gudahood, waxaana loo sheegay inuu dib ugu laaban doono dalkiisa hooyo ee Argentina gaar ahaan kooxdii caruurnimada ee Independiente del Valle .
Si kastaba ha ahaatee, The Mirror ayaa werisay in afar naadi oo Yurub ah oo ka dhisan Yurub , Barcelona , Paris Saint-Germain , Juventus iyo Inter Milan ay dhammaantood ay la xiriireen 32 jirkaan maadaama uu miisaamayo xulashadiisa
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Aguero uu ugu dambeyn doonayo inuu ku laabto dalkiisa hooyo, laakiin wuxuu kalsooni ku qabaa inuu sii wadi karo waxqabadkiisa heer sarre ee Yurub dhowr sano oo kale.
Aguero ayaa waxaa hoos u dhigay dhaawacyo iyo coronavirus taas oo noqon karta xilli ciyaareedkiisii ​​macsalaameynta ee City, kaliya 9 kulan ayuu saftay tartamada oo dhan wuxuuna dhaliyay labo gool Champions League.
Previous articleErling Braut Haaland oo xiiseenaya ku biirista mid kamid ah Kooxaha Premier League
Next articleLiverpool oo u adeegsan doonta Takumi Minamino saxiixa Lucas Ocampos.